ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါတွေ မျိုးပွားပုံ၊ လက္ခဏာများ နှင့် ၎င်းတို့ မည်ကဲ့သို့ မျိုးပွားကြသည် ။ ? | ငါးများ
ကားလို့စ်ဂါရစ်ဒို | | ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ
ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများဖြစ်သည် ၎င်းတို့သည်အရေခွံမရှိဘဲသူတို့၏ရှင်းလင်းသောအသားအရေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာဒီတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အားလုံးကိုရှင်းပြပါမယ် ကုန်းရေရေ၏မျိုးပွားတည်ရှိနေတတ်သောရေနေသတ္တဝါများ၊ ဥပမာအချို့နှင့်သင့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်မည့်အခြားသိလိုစိတ်များ။
2 ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ, သူတို့ကဘာတွေလဲ
5.2 စကျင်ကျောက် Newt (Triturus marmoratus)
5.3 ဘုံဘား (Bufo bufo)
5.4 Vermilion ဖား (Rana temporaria)
Ovararous ဖြစ်ခြင်း၊ ကုန်းရေရေ၏မျိုးပွား ဒါဟာဥတွေအတွက်ပါ။ တွားသွားသတ္တဝါများသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်အတွင်းမျိုးပွားခြင်းနှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်အတွင်းပိုင်းဓာတ်မြေသြဇာမှ (အမျိုးသမီးအတွင်း၌) မျိုးပွားနိုင်သည် ပြင်ပဓာတ်မြေသြဇာ.
La ကုန်းရေရေမြေသြဇာကိုလတ်ဆတ်သောရေတွင်တွေ့ရှိရသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရေအမျိုးအစားဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်းဥများကိုကာကွယ်ပေးပြီးကုန်းနေရေနေသတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ amniotic sac သို့မဟုတ် allantois စတဲ့သန္ဓေသားဆိုင်ရာပူးတွဲချက်တွေမလိုအပ်ဘဲခွင့်ပြုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။
ပြင်ပဖြစ်တည်မှုကိုမြေသြဇာကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းသည်ထူးခြားသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် - အထီးသည်ဥကိုဥထားသည့်အမျိုးသမီးကိုကိုင်ထားသည်။ ဤအထွက်လာအဖြစ်, အထီးတတ်၏ သူတို့ရဲ့သုက်ပိုးတွေကိုဖိတ်ပြီး fertilizing လုပ်တယ်။ ကြက်ဥများသည်ရေထဲ၌ကြိုးချည်သို့မဟုတ်ရေနေအပင်များနှင့်ကပ်လျက်ရှိသည်။ သူတို့ထံမှရေနေလောင်းထပ်ပေါ်လာသည်။
ပြင်ပဓာတ်မြေသြဇာများလွှမ်းမိုးသည့်ငါးနှင့်ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများတွင်ပါ၊ ကြက်ဥပါးလွှာသောအဖုံးရှိသည်၎င်းသည်မျိုးပွားမှုဖြစ်စဉ်ကိုမျိုးသုဉ်းစေရန်အတွက်၎င်းကိုဖြတ်ရမည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းဥများကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကပ်လျှက်ရှိသောရေထဲသို့ထည့်။ အချိုးအစားပြွတ်သိပ်သည်းသောအစုအဝေးများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများအဖြစ်တစ် ဦး အဖြစ်မွေးဖွားလာကြသည် အမြီးနှင့်အတူလှုံ့ဆော်ကြောင်းရေနေပိုးလောင်း နှင့်ပါးဟက်မှတဆင့်ရှူ။ Tadpole ဟုခေါ်သောပိုးလောင်းလုံလုံလောက်လောက်ကြီးထွားလာသောအခါ၎င်းသည်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် စုစုပေါင်းသှငျပွောငျးသှား။ မိုးသစ်တောဖားမျိုးစိတ်အချို့ မှလွဲ၍ ဤအင်္ဂါရပ်များသည်နောက်ဆုံးတွင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတောက်တောက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှအဆုတ်နှင့်ခြေထောက်များဖြင့်အစားထိုးလိမ့်မည်။
ဤကျောရိုးရှိသတ္တဝါရေနေသတ္တဝါများကိုဖွဲ့စည်းထားသည် ဖား, ပုတီး, ပုတ်သင်နှင့်ရေနေ caecilians။ ထိုကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများသည်အသက်ရှူရန်နည်းလမ်းများဖြစ်သောကြောင့်အစဉ်မပြတ်စိုစွတ်ရန်လိုအပ်သော်လည်းရေထဲ၌ရောအပြင်တွင်ပါနေထိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
လက်တင်စကားတွင် amphibian ဟူသောစကားလုံးသည်ထူးခြားသောအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး၎င်းသည်စာသားအရ“ ဘဝနှစ်ခု” ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပြီးတော့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ် ကွဲပြားခြားနားသောဂေဟစနစ်နှစ်ခု: မြေမျက်နှာပြင်နှင့်ရေနေareasရိယာ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလေ့လာနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများသည်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်သက်ရှိသတ္တဝါကြီး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ (သူတို့မှာအရိုးတွေရှိတယ်။ မန္တလေး (သင်၏သန္ဓေသားလောင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောစာအိတ်လေးခုအဖြစ်ကြီးထွားလာသည်။ ၎င်းသည်အသက်ရှူ။ အစာကျွေးနိုင်သောရေကြွယ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ တုတ်တုတ် (၎င်းတို့တွင်ခြေလက်အင်္ဂါ (၄) ခု၊ ectothermic (သူတို့က variable ကိုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ရှိသည်) ။
သူတို့ကခေါ်ကာလရှိသည် အသွင်ပြောင်း (အချို့သောတိရိစ္ဆာန်များသည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်ကြုံတွေ့ရသောပြောင်းလဲမှုနှင့် ၄ င်းတို့၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည်တို့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ) တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအထင်ရှားဆုံးအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာပါးဟက် (အသစ်) မှအဆုတ် (အရွယ်ရောက်သူများ) သို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများကိုဖွဲ့စည်းသောဤကြီးစွာသောမိသားစုအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမိန့်သုံးခုအပေါ် အခြေခံ၍ သေးငယ်သည့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ နာ, ရေနံချောင်း o urodeles y ရက်စက်မှု o မင်္ဂလာပါ.
အ နာ ၎င်းတို့သည်ဘားနှင့်ဖားများဟုလူသိများသောကုန်းနေရေနေသတ္တ ၀ ါများနှင့်အတူတကွစုစည်းထားသည့်ရေနေသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ သတိထားပါ၊ ဖားနှင့်ဖားများသည်တူညီသောမျိုးစိတ်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်တူညီခြင်းနှင့်အပြုအမူအားဖြင့်အတူတကွအုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။
အ urodeles ၎င်းတို့သည်အခြားကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများဖြစ်ပြီးအမြီးရှည်နှင့်ရှည်လျားသောပင်စည်ရှိခြင်းကြောင့်ကွာခြားသည်။ သူတို့၏မျက်လုံးများသည်အလွန်အမင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးသောကြောင့်အသားအရေကောင်းမွန်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေပုပ်များ၊ ဆလာမန်ဒိုင်များ၊ proteos နှင့် mermaid များကိုတွေ့ရှိရသည်။
နောက်ဆုံးတော့အမျိုးအစားတွေရှိတယ် apodal ကုန်းရေသူတို့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္toာန်ကြောင့်အထူးခြားဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ခြေလက်မရှိသောကြောင့်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကြာရှည်စွာမနေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်တီကောင်သို့မဟုတ်မြေမြှုပ်နှင့်ဆင်တူသည်။
ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများသည်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်“ အခွင့်ထူး” ဖြစ်သည် ပိုပြီးစရိုက် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၌နေသောဤအတန်းအစားတိရိစ္ဆာန်များ၏။ ၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းသန်း ၃၀၀ ခန့်လုံးလုံးနီးပါးရှိခဲ့ပြီဟုဆိုကြသော်လည်းဘာမျှနီးပါးမျှမရှိချေ။
သူတို့မှာခြေလက်အင်္ဂါလေးခုရှိတယ်။ ရှေ့နှစ်ခုနဲ့နောက်ဘက်။ ဤရွေ့ကားခြေလက်အင်္ဂါများ၏ဒီကဗျာနာမကိုအမှီလူသိများကြသည် ကရီ။ quiridus ဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့လက်နဲ့တူတယ်။ ရှေ့ခြေထောက်မှာလက်ချောင်းလေးချောင်းနဲ့နောက်ဖက်မှာငါးခုရှိတယ်။ အခြားကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများစွာတွင်အမြီးနှင့်တူသောခြေလက်များရှိသည်။
၏သတ္တဝါဖြစ်ခြင်း သွေးအေးသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မှာ၎င်းတို့အတွင်းရှိအပူကိုထိန်းညှိ။ မရသောကြောင့်၎င်းတို့တည်ရှိရာပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်များစွာမူတည်သည်။ ၎င်းသည်ရေနှင့်မြေပေါ်တွင်အသက်တာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်စေသည့်အင်အားကြီးစေသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီစနစ် (၂) ခုကမင်းရဲ့ခန်ဓာကိုအပူလွန်ကဲခြင်း၊
သား oviparousသူတို့ဥမှပေါက်။ အမသည်ဤဥများကိုသယ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သူမသည်ရေနေသတ္တဝါများတွင်အမြဲတမ်းပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်နမူနာပုံစံငယ်များတွင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်ရှိသည်။
ဤအသက်ရှိများ၏အရေပြားဖြစ်ပါတယ် ဖြတ်သန်းမတူကွဲပြားသောမော်လီကျူးများ၊ ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အခြားအမှုန်များကကူးစက်နိုင်သည်။ အချို့သောမျိုးစိတ်များသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာများကိုအရေပြားမှတစ်ဆင့်ပြင်ပအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
သင်၏အသားအရေကိုအာရုံစိုက်ခြင်းပင်လျှင်၎င်းသည်သတိပြုသင့်သည် စိုစွတ်သောနှင့်အကြေးခွံနှင့်အတူ depopulated၎င်းတို့ကိုသယ်ဆောင်သည့်အခြားအမျိုးအစားများနှင့်မတူသည်။ ဤအခြေအနေကသူတို့ကိုရေနှင့်အောက်ဆီဂျင်ကိုကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင်စေသည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ကသူတို့ကို၏ဖြစ်စဉ်များမှအလွန်အားနည်းချက်စေသည် ရေဓာတ်။ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများသည်စိုထိုင်းဆပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိပါက၎င်း၏အသားအရေသည်လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောပြproblemsနာများနှင့်သေစေနိုင်သည်။
ဤတိရိစ္ဆာန်များသည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ရှိသည် tricameral နှလုံး နှစ်ခုမိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်နှင့် ventricle ၏ရေးစပ်။ ၎င်း၏လည်ပတ်မှုပိတ်, နှစ်ဆနှင့်မပြည့်စုံသည်။
မျက်လုံးများသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပြီး၊ မြင်ကွင်း၏ကြီးမားသောလယ်ပြင် အလားအလာရှိသောသားကောင်ကိုလိုက်ရှာသည့်အခါအလွန်သင့်လျော်သော။ newts ကဲ့သို့ခြွင်းချက်ရှိပါသည်။
ကုန်းရေနေသတ္တဝါများကမထင်ရသော်လည်း သူတို့မှာသွားတွေရှိတယ်ဤအရှားပါးသော်လည်း။ ၎င်းသည်အစားအစာကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ လျှာသည်အခြားသေးငယ်သောတိရိစ္ဆာန်များကိုဖမ်းယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကတစ် ဦး ကိုတင်ပြ tubular ပုံအစာအိမ်အူမကြီးအတို၊ ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့်ဆီးအိမ်နှင့်အတူ။
လက်ရှိတွင်အချို့ပတ်ပတ်လည်ကက်တလောက်ရှိပါတယ် ကုန်းရေနေသတ္တဝါမျိုးစိတ် ၃၅၀၀။ သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်များကခန့်မှန်းချက်အရစုစုပေါင်းအရေအတွက်သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည် 6.400.
ဤ salamander အမျိုးအစားကို axolotl သို့မဟုတ် purepecha achoque ဟုလည်းလူသိများသည်။ ၎င်းသည်နေရာဒေသတစ်ခုတွင်သာတည်ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်Michoacán (မက္ကဆီကို) ပြည်နယ်ရှိ Zacapu ဂွ၌သာနေထိုင်သည်။
၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အလုံအလောက်ထူသောကိုယ်ထည်၊ အမြီးတိုနှင့်ပါးဟက်များရှိသည်။ ၎င်း၏လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်အရောင်သည်၎င်း၏အနက်ရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ ၎င်း၏တစ်ကိုယ်လုံးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားသဖြင့်၎င်းကိုသတိမပြုမိဘဲနေစေသည်။
စကျင်ကျောက် Newt (Triturus marmoratus)
ဤတိရိစ္ဆာန်သည်ဥရောပပိုင်နက်အထူးသဖြင့်စပိန်မြောက်ဘက်နှင့်ပြင်သစ်အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စိမ်းလန်းသောအရောင်နှင့်အလွန်တောက်ပသောစိမ်းရောင်သောအရောင်များနှင့်အတူပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏နောက်ကျောကိုအနီရောင်ခြယ်ပစ္စည်း၏အလွန်ထူးခြားသောဒေါင်လိုက်လိုင်းအားဖြင့်ဖြတ်ကျော်သည်။
ဘုံဘား (Bufo bufo)
၎င်းကိုဥရောပတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးနှင့်အာရှ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ ဆည်မြောင်းareasရိယာများစသည်တို့ပါဝင်သောနေရင်းဒေသများကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ရေမရှိသည့်ရေတွင်နေထိုင်မှုအခြေအနေကိုအလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းက၎င်းကိုအကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့်လူသိအများဆုံးကုန်းရေနေသတ္တဝါများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်တောက်ပသောအရောင်များမရှိသော်လည်း၎င်း၏အသားအရေသည်နူးညံ့သောအရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထား၍ ကြွက်နို့ပုံစံများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
Vermilion ဖား (Rana temporaria)
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဆွေမျိုးများကဲ့သို့ပင်ဤကုန်းနေရေနေသတ္တဝါသည်ဥရောပနှင့်အာရှကို၎င်း၏နေအိမ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ စိုစွတ်သောနေရာများကိုနှစ်သက်သော်လည်းဤဖားသည်၎င်း၏အချိန်အများစုကိုရေထဲမှထုတ်ပစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောအရောင်နှင့်မသက်ဆိုင်သော်လည်းလူတစ် ဦး စီသည်မတူညီသောအရောင်များကိုတင်ပြနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အစက်အပြောက်များဖြင့်အညိုရောင်အသားအရေကိုလွှမ်းမိုးထားလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါအညိုရောင်နှာခေါင်းက၎င်း၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါး၏ » အခြားသူများကို » ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ » ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ